Ngaba uWilson uyakumangalisa ngepeyinti yakhe yeoyile | Izidalwa ezikwi-Intanethi
"Alchemy", ipeyinti yeoyile nguWill Winson
Omnye umsebenzi ongaqhelekanga kunye ongaqhelekanga le sinayo kule migca nguWill Wilson apho unokufumana khona ubuchule obukhulu beoyile. Ukhakhayi apho sifumana iintlobo ezahlukeneyo zeepaddles. Imibala ekhethwe kakuhle ukubonisa umsebenzi ovuselelayo apho ibhabhathane yenye yeendlela eziphambili.
Umzobi ngubani ayidluli kwimithombo yeendaba zentlalo ukuze abe nokunxibelelana nabalandeli bakhe bexesha elizayo kunye nabo banokuthi bathabatheke yimisebenzi yakhe yonke yemifanekiso, eneendidi ezininzi zemizobo yeoyile apho inani lomntu kunye nemizobo eyinxalenye enkulu.
Ngaba uWinson uza kule peyinti yeoyile akushiyi ungakhathali kwaye ndikwenze uhlale ukhangele olo khakhayi oluba sisikhongozelo apho zonke ezo zixhobo zisetyenzisiweyo zenza ingcinga zalo mzobi.
Ukuba sijonga yonke imizobo yakhe sinokumangaliswa kukuqamba kwakhe ngokungathi yayizezodidi kodwa zinemiboniso ukusukela namhlanje apho kuvela "abalinganiswa" banento yokuxela, nangona nge-halo yemfihlakalo.
Unayo iwebhusayithi yakho kweli qhagamshelo apho ungawufumana khona umsebenzi wakhe omkhulu kwiindidi ezahlukeneyo ezinjengomfanekiso, umzobo, izilwanyana okanye imifanekiso-mifanekiso. Ezi zokugqibela zibetha kakhulu inkangeleko eyahlukileyo ngokufanayo umda wobudenge kwezinye ngelixa kwezinye ukunganyanzeleki phambi kwesipili ukuzibonisa yenye into ekhethekileyo.
Omnye umbono okhethekileyo lo mzobi unalo nelinye lala mizobo ikwanalo necala elimnyama, ngakumbi kwelezilwanyana apho zineemeko ezizizo nezingafaniyo nezinye zabapeyinti. Ukuba ubukhangela into eza kukothusa namhlanje, ngokuqinisekileyo uWilson uya kukuxaka kwaye akubambe kwangaxeshanye.
https://www.creativosonline.org/el-oleo-de-istvan-sandorfi.html iza kuluncedo ukulandela ekuvukeni kukaWilson.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » "Alchemy", ipeyinti yeoyile nguWill Winson
Ubugcisa bukaChloe Giordano kwi-Embroidery
Imizobo yezilwanyana edityaniswe nejometri emsulwa